Mauricio Pochettino “ma Doonayo Inuu Sii Joogo PSG Wixii Ka Dambeeya Dhamaadka Xilli Ciyaareedka”.
HomeHoryaalka FranceMauricio Pochettino “ma doonayo inuu sii joogo PSG wixii ka dambeeya dhamaadka xilli ciyaareedka”.
February 3, 2022 Horyaalka France, Wararka Ciyaaraha 0
Mauricio Pochettino ayaa lagu soo waramayaa in uu diyaar u yahay in uu iskaga tago shaqada tababaranimo ee kooxda Paris Saint-Germain dhamaadka xilli ciyaareedkan.
49-sano jirkaan ayaa hore ugu guuleystay Coupe de France iyo Trophee des Champions ee Parc des Princes, laakiin shaki ayaa ku jira mustaqbalkiisa fog ee caasimada Faransiiska.
PSG ayaa la filayaa inay dib u soo ceshato horyaalkeedii Ligue 1 xilli ciyaareedkan, laakiin Pochettino ayaa la filayaa inuusan ku faraxsanayn xaaladiisa Paris, waxaana uu doonayaa inuu u dhaqaaqo meel kale.
Sida laga soo xigtay Foot Mercato , Pochettino Kuma niyad sama kumana faraxsana habka uu PSG u maamulo, taasoo keentay in xiriir aan wanaagsanayn uu la yeesho agaasimaha ciyaaraha ee Leonardo oo uu ku guuldareystay inuu u dhaqaaqo Tanguy Ndombele .
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Pochettino uusan sidaas darteed ku jiri doonin garoomada xilli ciyaareedka 2022-23, Manchester United ayaana kalsooni weyn ku qabta inay shaqaaleysiiso carbiyaha reer Argentina xagaaga.
PSG ayaa la filayaa inay raacdo Zinedine Zidane haddii Pochettino uu baxo sanadkan, waxaana la filayaa in tababarihii hore ee Real Madrid uu doonayo inuu keeno Arsene Wenger kooxda si uu u bedelo Leonardo